Amashabhu Wokumaketha Komphakathi | Iqala ngoMashi 1, 2021 | Umcimbi obonakalayo
I-Tag: ukwakhiwa kweqembu
Kuphi Ukuxhumana Nge-imeyili Kuphethwe?
NgeSonto, Okthoba 25, 2009 NgoLwesithathu, Februwari 10, 2016 U-Adam Encane
Isikhathi sokufunda: 2 imizuzu Ngiwele kumkhuba omubi wokubeka ama-imeyili eceleni ukuze enzelwe inyanga noma ngaphezulu. Nginohlelo lokulanda ama-imeyili angenayo. Uma zingadingi ukunakwa noma isenzo sami ngokushesha kungapheli isikhathi esithile ukuze ngigweme izinhlungu zohlobo oluthile, ngibavumela nje ukuthi bahlale. Mhlawumbe yinto embi leyo. Noma mhlawumbe cha. Lesi sihloko sonke sangicubungula nomngani (isisulu “sesikhathi sami sokulinda”)
Ukugcinwa Kohlu Lokumaketha Nge-imeyili
UMsombuluko, May 25, 2009 NgoLwesithathu, July 8, 2009 Douglas Karr
Isikhathi sokufunda: <1 iminithi Ugcina nini ukubhala kabusha uhlelo lwakho lwe-imeyili ukuqinisekisa ukuthi uhlu lwakho lwe-imeyili luhlukaniswe kahle futhi ababhalisile bathola imininingwane abayifunayo? Abakhangisi abaningi banake kuphela izibalo ezinkulu zababhalisile… uhlu oluncane lwe-imeyili nokuqukethwe okuqondisiwe kuhlala kudlula imidiya enkulu. Nayi i-imeyili yesondlo ephelele, etholwe kusuka kuWebTrends: Izihloko zihlukaniswe kahle futhi ukuvuselela engikukhethayo bekungukuchofoza okukodwa. Uma ungabamba izintandokazi zababhalisile
Kungani ukhuluma nami?
NgoMgqibelo, Novemba 22, 2008 Douglas Karr
Isikhathi sokufunda: <1 iminithi Impendulo ezenzakalelayo ebhekiswe engifisa ukuthi ngiyishiyele kukho konke ukuzibandakanya engikucelile engikuthola nge-imeyili, ukuxhumana nomphakathi kanye nama-blogs amancane: Angikwazi. Ngokuzimisela. Kungani ukhuluma nami? Ungithole kanjani? Ngikunike imvume yami? Ngikutshele ukuthi nginentshisekelo kumkhiqizo noma kusevisi yakho? Ukhuluma nami ngoba bekufanele? Noma kungekho lutho olungasebenza? Ngabe uyazi ukuthi ngubani
Umhlahlandlela we-Benchmark Guide we-imeyili ka-2009
NgoLwesithathu, Okthoba 8, 2008 Douglas Karr
Isikhathi sokufunda: 2 imizuzu Khulisa imiphumela yakho ye-imeyili ngokuziphendulela nangendlela efanele nge-MarketingSherpa's 2009 Marketing Marketing Bechmark Guide. Amabhizinisi afuna izindlela ezonga izindleko zokukhulisa umthelela nokwakha ubudlelwano kulokho okungenzeka kube nzima emnothweni womhlaba. Futhi i-imeyili iyaqhubeka ingenye yezindlela ezisetshenziswa kakhulu nezisetshenziswa kabi lapho abathengisi baphendukela khona ukuze baxhumane namakhasimende abo. Kepha ukuphela kwendlela yokwandisa ukusebenza kwakho kwe-imeyili ukumaketha ngokuziphendulela nangempumelelo.
Angiyi kwaBarnes naseNobles Namuhla!
NgoMgqibelo, Ephreli 19, 2008 NgoMgqibelo, Ephreli 19, 2008 Douglas Karr
Isikhathi sokufunda: <1 iminithi Bakhe iBarnes neNobles ebangeni elingamakhilomitha ambalwa ukusuka ekhaya lami futhi isitolo esihle impela. Kubukeka sengathi ngiba nesikhathi esinzima ukuthola izincwadi zami lapho, noma kunjalo. Imingcele ibonakala inezindlela ezilinganiselwe zokuhlela amashalofu abo. Noma kunjalo, ngizijabulela kakhulu zombili izitolo kepha ngiye ngazithola ngiseBarnes naseNobles kaningi ngoba bane-Starbucks ene-Wireless ene-AT & T. Angikaze ngiye
Okudlule 1 2
Ikhasinkomba 2 of 2
Siyakwamukela ku Martech Zone
Buka ividiyo mayelana Douglas Karr, umsebenzi wakhe, izinkampani zakhe, neminikelo yakhe.
Izigaba Khetha Category Ubuchwepheshe Bokukhangisa Izibalo nokuhlola Ukukhangisa Okuqukethwe Ukuphathwa Kobudlelwano Namakhasimende Nezingxenyekazi Zedatha Ezohwebo kanye nokudayisa Ukumaketha Nge-imeyili Nokuzenzakalela Kwe-imeyili Ubuchwepheshe obuqhamukayo Umcimbi Wokumaketha Amavidiyo Wokumaketha Nokuthengisa Izincwadi Zokumaketha Imicimbi Yokumaketha I-Marketing Infographics Amathuluzi Okukhangisa Ukuqeqeshwa Kwezentengiso Ukumakethwa Kwamaselula Nethebulethi Ezimayelana Nomphakathi Ukunika Amandla Ukuthengisa Sesha Marketing Social Media Marketing
IHunter Hastings: Amathuba Enkingeni nokuthi Abathengisi Namabhizinisi Bazophumelela Kanjani
kulesi Martech Zone Inhlolokhono, sikhuluma noHunter Hastings, umakethi ngokomsebenzi nangusomnotho osiza ekufundiseni abaholi bamabhizinisi kanye nokuba namabhizinisi eMises Institute. Sixoxa ngezinselelo namathuba amabhizinisi azoba nawo ekunqobeni ubhadane kanye nokushintsha kwamabhizinisi nokuziphatha kwabathengi okuze nakho. Ku…
U-Erin Jordan Spanski: Okhiye Abathathu Lapho Kukhethwa i-B2B Marketing Agency
kulesi Martech Zone Ingxoxo, sikhuluma nePhini likaMongameli kanye nozakwethu eWalker Sands. U-Erin ungubudlelwano bomphakathi obufezekile nobuchwepheshe bokumaketha ngentshisekelo yokusiza izinkampani zobuchwepheshe ze-B2B zikhule. Sixoxa ngezihluthulelo ezintathu zempumelelo lapho sikhetha futhi sisebenza ne-B2B Marketing Agency. Ukusuka kumasu kuya ekusebenzeni, i-Walker Sands…
UJack Klemeyer: Ubuholi Bokumaketha Nekusasa Engaqinisekile
Kulesi siqephu, sixoxisana noJack Klemeyer, umqeqeshi osemnkantshubomvu kwezamabhizinisi onesipiliyoni seminyaka engama-25. UJack unikeza ukuqonda kwakhe ngekusasa lomnotho elingaqinisekile lamabhizinisi nokuthi abaholi kufanele baphendule kanjani, basabele kanjani, futhi baphumelele. Kulesi siqephu, sixoxa ngezinto ezithile ezibalulekile eziseduze nezithandekayo ezinhliziyweni zabaholi ngalezi zikhathi ezikhathazayo…
UJanet Mesh: Ukuphelelisa Ukumaketha kwe-Agile kanye nePivot esheshayo
kulesi Martech Zone Ingxoxo, sikhuluma noJanet Mesh, oyi-CEO kanye noMsunguli we-Aimtal. UJanet ungummeli futhi usebenza ngokukhangisa okushesha neqembu lakhe langaphakathi namakhasimende angaphandle. Ngokumiswa kwansuku zonke (okubonakalayo), isoftware yokusebenzisana, nama-sprints masonto onke, uJanet nethimba lakhe baphumelele i-Quick Pivot, inqubo yokwenza amasu we-pivot asuselwe…
URavi Chalaka: Ukuhambisa Ukuthengisa Nokumaketha Ezingqungqutheleni Neemihlangano Ebonakalayo
kulesi Martech Zone Ingxoxo, sikhuluma noRavi Chalaka, umphathi omkhulu wezokumaketha kanye ne-VP yezokumaketha kwemikhiqizo eJifflenow, i-Meeting Automation Platform. Ngenkathi izinkampani zikhansela imihlangano yazo nezingqungquthela zazo, futhi zahambisa amaqembu azo okuthengisa nawokumaketha ukuthi asebenze ekhaya, kwakudingeka zinqobe izinselelo eziningi. Kusuka ekuhlanganeni ngevidiyo…
UKatie Mares: AmaBrands Angalalela Kanjani Futhi Aphendule Kumthengi Wabo Onethonya Kunabo Bonke ... Abesifazane
kulesi Martech Zone Ukuxoxisana, sikhuluma noKatie Mares, umbhali we Ukuthola Ibhizinisi Lakhe: Ukubaluleka Kokwenza Isipiliyoni Somkhiqizo Wakho Kumthengi Wabesifazane. Yize ukunyakaza kwabesifazane kuhlangene ezweni lethu lezenhlalo futhi nabantu beshumayela amandla amantombazane, uKatie ubonile ukuthi le mindset ayingenanga ngokubeka uphawu ebhizinisini noma amabhizinisi esipiliyoni…
I-Torchlite: Indawo Yemakethe Yama-Small Business Salesforce Essentials "Flexperts"
kulesi Martech Zone Ingxoxo, sixoxisana noSusan Marshall, umsunguli kanye ne-CEO yeTorchlite. USusan wabelana ngokubambisana kwenhlangano futhi ugxile ekwesekeni amabhizinisi amancane ngokuqaliswa kwawo kweSalesforce Essentials kanye nokwesekwa. I-Salesforce Essentials iyi-CRM eyakhelwe ngqo amabhizinisi amancane avela ku-Salesforce. Ngendlela eyiqiniso yakwaSalesforce, ipulatifomu ingenzelwa i…
Ubumfihlo namakhukhi: Leli sayithi lisebenzisa amakhukhi. Ngokuqhubeka nokusebenzisa le webhusayithi, uyavuma ukusetshenziswa kwabo.
I-PHP ne-SQL: Bala noma ufune ibanga phakathi kwamaphoyinti weLatitude ne-Longitude
Kule nyanga bengihlela kancane ku-PHP naku-MySQL maqondana ne-GIS. Isnuza eduze kwenetha ...
Ukubikezelwa Kokuthengwa Kwe-Valentine's Day Retail kanye ne-eCommerce ngo-2021
Uma ibhizinisi lakho lokuthengisa noma le-ecommerce belilokhu lidonsa kanzima ngubhadane kanye nokukhiya, ungahle ufune ukusebenza ...
Yini i-Web Emnyama, i-Deep Web, ne-Surface / Web ecacile?
Asivame ukuxoxa ngokuphepha okuku-inthanethi noma i-Dark Web. Ngenkathi izinkampani zenza umsebenzi omuhle wokuvikela okwangaphakathi ...
Qinisekisa Uhlu Lakho Lokumaketha nge-imeyili ku-inthanethi: Kungani, kanjani, futhi Kuphi
Ungahlola kanjani futhi uthole izinsizakalo ezihamba phambili zokuqinisekisa i-imeyili kuwebhu. Nalu uhlu oluningiliziwe lwabahlinzeki njengo ...
© Copyright 2020 DK New Media, Wonke Amalungelo Agodliwe
Ukumaketha Nge-imeyili Nokuzenzakalela Kwe-imeyili